ကြည့် … ဘာ အရောင် တွေ ကို မြင်လဲ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
World News » ကြည့် … ဘာ အရောင် တွေ ကို မြင်လဲ?	35
Posted by မြစပဲရိုး on Feb 28, 2015 in World News | 35 comments
မနေ့ က internet ထဲ ဖြစ်နေတဲ့ နာမည်ကြီး အငြင်းပွါးမှု တစ်ခု မို့ တို့ ရွာသားများ လဲ ပါဝင် လို့ ရအောင် မျှပါတယ်။
ဇာတ်လမ်း အစ က စကော့တလန် က မင်္ဂလာဆောင်မဲ့ သတို့သမီး ရဲ့ အမေ ဝတ်မဲ့ ဂါဝန် က စပါတယ်။
ဝတ်မဲ့ ဂါဝန် ရဲ့ ပုံ ကို သူ့သမီး ဆီ ကို ပို့ လိုက်တော့ သမီး မြင် တဲ့ အရောင် နဲ့ သားမက် မြင်တဲ့ အရောင် ကွဲ နေ ပါရော။
အဲဒီ ကနေ အင်တာနက် က တစ်ဆင့် ကမ္ဘာကျော် သွားပါရော။
သိပြီး သား ဆို ငြိမ်ငြိမ်နေ။
မသိ ရင် ဖြေ။
သတင်း ရှာမဖတ် နဲ့ ဦး။ (ဖတ်ချင်လဲ ဖတ် ဟယ်)
လူ ၅ ယောက် လောက် ရ ပြီး ရင် ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်း ကို ပြောပါ့မယ်။ ဒါ့ပုံ ဆြာ တွေ က တော့ အကြောင်းရင်း သိမှာပါ။
သို့ပေသည့် အဲဒါက အဖြေရင်း မဟုတ်ပါလေ။ lol:-)))))
Mr. MarGa says: အရီး နောက်ကျသွားပြီ ဟဲဟဲဟဲ
မနေ့က အဂ္ဂမဟာ ဖွဘုတ်တော်ကြီးမှာ ကျနော် ရှယ်ပြီးပေါ့
ဆိုတော့ နောက်လူတွေ စောင့်လိုက်ဦးမယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: မင်း မျှပြီး ပြီး ဆိုတော့ ဇာတ်လမ်း က သိပြီး ရောပေါ့။
တောက်စ်။ (စီဒီ – ဂဂ)
အဖြေ တွေ က ကွဲ တယ်လား။ တူလား။
မင်းမြင်တာ ရော မှန်လား။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: စောင့်ကြည့်လိုက်ပါဦး
မြစပဲရိုး says: အရီး တို့ က အဖေ နဲ့ အမေ က မြင်တာ ဆင်တယ်။
ဒါပေမဲ့ ထပ်တူ မတူ ဘူး။
ကလေး က ပုံမှန် အရောင် ကို တန်းမြင်တယ်။
ထူးခြားတာ က သူ က မျက်မှန် သမား။
အမေ က စာကြည့် မျက်မှန် လိုတယ်။
အဖေ က ဘာ မျက်မှန် မှ မလို ဘူး။
အဲဒီ ပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲ တော့တာ ဘဲ။
kai says: မဖတ်ရသေး..
မြင်တာကတော့.. အပြာနုလွင်တောက်တောက်လေးပေါ်မှာ ရွှေအိုရောင်ညိုညိုလေးမြင်သဗျ..။
မြစပဲရိုး says: သူကြီး ကျွန်မ မြင်တာ နဲ့ တူတယ်။
တစ်ချို့ က အဲဒါ ကို အဖြူ ရောင် နဲ့ အစိမ်း လို့ လဲ မြင်ကြသတဲ့။
မော်နီတာ ကို အလင်း အမှောင်ချိန် ပြောင်း ပြီး ထပ်ကြည့်လိုက်။
ဒီလို ပြောင်းတော့ ကျွန်မ က ပုံမှန် အရောင် ကို မြင်လိုက် တယ်။
ကျွန်မ မင်းသား ကတော့ ဘယ်လို ပြောင်းပြောင်း အမှန် မမြင်ရှာဘူး။
ကလေး ကတော့ အဲဒီ အရောင် ကို အရောင်မှန် အတိုင်း တန်းမြင်တယ်။
လူတွေ ရဲ့ မျက်စိသူငယ်အိမ် ကွာခြားမှု တွေ က နေ အရောင် ကို အမြင် တွေ ကွာသွားတာ။
သင်ခန်းစာက တော့ ကိုယ့် အမြင်ရှုဒေါင့် နဲ့ တစ်ခြားအမြင် တွေ ကွာနေတာ ဟာ အကြောင်းမဲ့ မဟုတ်။
အားလုံး မှာ reason ရှိနေတဲ့ အကြောင်း ပါဘဲ။
ဒါလေး ကို မြင်လိုက် ရင် ကမ္ဘာကြီး က ငြိမ်းချမ်းသွားမှာပါ။
ကိုမျိုး လဲ ဖတ်ပြီး ပြီ ဆိုတော့ အဖြေပြောပြီ ဗျာ။
ခရမ်းဖောက် တဲ့ အပြာရင့် နဲ့ အမဲ ဇာ လေး တွေ စပ်ပါ။
ခင်ဇော် says: တူတူပဲ။
အပြာနု နဲ့ ရွှေညိုရောင်
သူငယ်ချင်း လင်မယား မနေ့ ည က ထသတ်ကြသတဲ့။
မြစပဲရိုး says: ဟား ဟား။
တော်ကြာ အရီး မှန်းသလို မဟုတ်ဘဲ ဒီ သတင်းဖြစ်ပြီး လင်မယား ကွဲ နှုန်း မြင့်တက် တာ ဖြစ်နေ ရင် ပြီး ရော။ lol:-)))))
kai says: ကွန်ပြူတာက..မော်နီတာ၂လုံး..။ တက်ဘလက်..။ ဆဲလ်ဖုံးအကုန်ပြောင်းကြည့်တာ.. အတူတူပဲဖြစ်နေသဗျ..။
အဒိုဘီဖိုတိုရှေ့ာပေါ်ဆွဲချလိုက်ပြီး.. ကာလာချိန်ကြည့်တော့.. မူရင်းဓတ်ပုံက.. ကာလာဘန်းနေပုံရတယ်ထင်တာပဲ..။
အမှန်မမြင်ဘူးဆိုရင်တော့.. သေပြီဆရာ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဘေးကတစ်ယောက် ဒီ အတိုင်းပါဘဲ။
ဒါကြောင့်ပြော တာ သိလား။
အင်မတန် ခေါင်းမာ ပြီး အငြင်းထူ သူများ မှာ အမှန်အရောင် မမြင် တာ သွား တွေ့ တော့တာဘဲ။
Mr. MarGa says: ဆိုးတာက နည်းမျိုးစုံပြောင်းကြည့်လဲ အဖြူခံ ရွှေညိုရောင်ဖောက်တာကိုပဲ မြင်နေတာပဲ ပုံကို contrast ညှိပြီး ပြင်ထားတာ တောင် အပြာနုလို့ပဲမြင်နေတာ
တောင်ပေါ်သား says: မနက်ကတည်းက ဖတ်ပြီးပြီ ၊
Alinsett@Maung Thura says: သူများ မြင်တာတွေကို လိုက်မြင်ကြည့်သွားတယ်ဗျာ..
ကိုယ်က မမြင်တတ်လို့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 280
Courage says: black & blue ပဲ
kai says: မူရင်းအရောင်နဲ့.. ပုံတဲ့..
Ma Ma says: မလတ်ပြတဲ့ပုံမှာ အဖြူ နဲ့ ရွှေအိုရောင်မြင်တယ်။
သဂျီးပြတဲ့ပုံမှာ အပြာနဲ့ အမဲ မြင်တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: မလတ်ပြတဲ့ပုံမှာ ခရမ်းပြာနဲ့ အညိုရောင်လို့မြင်တယ်။
သူကြီးပုံကတော့ နေဗီပြာနဲ့ အနက်မြင်တယ်။
ဖွဘုတ်ထဲ သကြားပြတော့ ဘာလို့ ငြင်းနေကြပါလိမ့်တွေးမိတယ်။
hmee says: အရီးပုံမှာ အပြာ​ရောင်​ ခရမ်းနဲနဲစွက်​ ဇာအနက်​ မြင်​တယ်​။ သဂျီးပုံမှာ အပြာ​တောက်​​တောက်​ ဇာ အနက်​ မြင်​ပါသည်​။
black chaw says: ဘာရယ်ဟုတ်ပါဘူး။
၀င် ရောတဲ့ သဘောမျိုးပါ…။
အပြာနဲ့ ချောကလက်ရောင် ပဲ မြင်ပါတယ်…ခင်ဗျ…။
လုံမလေးမွန်မွန် says: ပြသနာပဲ.. အနော်တော့ သွားပြီထင်တယ်..
အရီးပြတဲ့ပုံမှာ အဖြူနဲ့ နံသာရောင်လို့ မြင်ပြီး
သဂျီးပြတဲ့ပုံမှာ ခရမ်းပြာနဲ့ အနက်လို့ မြင်ပါတယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 181
nicolus agral says: အဖြူနဲ့ အမည်းပဲမြင်တယ်
မြစပဲရိုး says: အမှန်က သူကြီး ပြထားတဲ့ ပုံ က ဓာတ်ပုံ ကာလာ အလင်းအမှောင် အမှန် မို့ အားလုံး (ကာလာ ဘလိုင်း မှလွဲလို့) ညီတူ မြင်နိုင်တယ်။
ဒါကြောင့် အားလုံး အဖြေတူ ကြတာ။
ကျွန်မ ပြထားတဲ့ ပုံ က အလင်းအမှောင် မမှန် တာမို့ အမှန် ရိုက်ထား တဲ့ အရောင် ပြောင်းနေတယ်။
အဲဒီမှာ ထူးဆန်းတာက ပြောင်းတဲ့ အရောင် ကို မြင်ကြတာ တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် မတူ ကြတာဘဲ။
ဒီမှာ အငြင်းပွါးမှု တွေ ဖြစ်ကုန်တာ။
အခုလဲ ရွာထဲမယ် ကျွန်မ ပြထားတဲ့ ပုံ အပေါ်မှာ မတူတာ တွေ တွေ့နေပြီဟုတ်။
ကျွန်မ ရဲ့ လူပြိန်း လို နားလည်တာ ကတော့ မျက်လုံး သူငယ်အိမ် (အထင်) ပါဝါ တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် မတူကြ တော့ အရောင်အပြောင်း ကို လိုက် ညှိ တာ တွေ ကွာပြီး အမြင်ကွာ တာလို့ ပြောတာဘဲ။
ဆေးပညာ အရ တတ်ကျွမ်းသူ ရှင်းပြရင် ပိုရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ပိုလဲ ရှုပ်သွားနိုင်တယ်။ lol:-))
လောကဓာတ်ပညာ တွေ က ဆန်းသား ကို။
ဒီမှာ သင်ခန်းစာ က
တစ်ချို့ အရာ တွေမှာ မူရင်း ကို ပျောက် စေတဲ့ အကြောင်း (ဒါမှမဟုတ်) ဖျောက်ထားတဲ့ အကြောင်း တွေ ရှိနေတာ မို့ အဲဒီလို အခြေအနေ မှာ အမြင်ကွဲနိုင်တာလေး သတိပြုကြဖို့ပါဘဲ။
မတူလို့ မလိုက်နာနိုင်ရင်တောင် မတူတာကို လက်ခံ နိုင်ဖို့ ပေါ့။
Ma Ma says: ကြည့်တဲ့ထောင့်ကွာရင်လည်း မြင်ရတဲ့အရောင်ပြောင်းတယ်။
ဒီပိုစ့်ကို ဖွင့်ထားပြီး ဘေးနားကအမတွေကို ပြကြည့်တော့ သူတို့က မလတ်ပြတဲ့ပုံမှာတင်ပဲ အရောင်မှန်ကို မြင်ရတယ်။
ဒါမှမဟုတ် မလတ်ပြောသလို ခေါင်းမာပြီး အငြင်းထူလို့ပဲ အရောင်အမှန်မမြင်တာလားတော့ မသိဘူး။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2706
ကထူးဆန်း says: ဗမာ ဆန်ဆန် ဘဲ .. ဒီလို အရောင်ပြောင်းတာ အပမှီတာ ဖြစ်မယ် ..
ကိုးကွယ်ဖို့ ထားဦးမှ …. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2374
အမြင်မကြည်ရင်တော့ မှုံဝါးဝါး အူကြောင်ကြားနိုင်တယ်ဆိုလားဘဲ။
ဦးကြောင်ကြီး says: ကြည့်နေမှဒေါ့ အစစ် မြင်ဗာအုံးမလား အမ်တီအေးရဲ့…
ဦးကြောင်ကြီး says: အနော်ကဒေါ့ ဘာကျိကျိ ဘီလူးရောင် အယင်မြင်အိစ်။။။
မြစပဲရိုး says: ကိုယ်သန်ရာပေါ့ ကြောင်ကြောင် ရယ်။ lol:-))))
ကိုရင်စည်သူ says: ဘီလိုကြည့်ကြည့် အပြာနဲ့ အမဲပဲမြင်တယ်ဂျာ..
အသက်ကြီးလေ ၀ါးချင်လာလေဘဲ။ မျက်လုံးဒွေက.. :P
kai says: အရီးလတ်ပြတာကို အဲလိုမြင်ရင်တော့.. အမှန်မြင်တာလို့ခေါ်ရမယ်ဖြစ်သဗျ…။
စကားအတင်းစပ်.. အိမ်ကလေဒီနဲ့.. ပိပိလေးကတော့.. အဖြူအမဲမြင်ကြတယ်တဲ့..။
manawphyulay says: ပါတဲ့အရောင်အတိုင်း မြင်ပါတယ်…. :Lol:
ရွှေတိုက်စိုး says: ကျုပ်ကတော့ ဘာမြင်လဲသိလား တော်တော်အားနေကြတဲ့သူတွေတော့ မြင်တယ်ဗျာ… ကဲ အေးရော… ခိခိ
Mike says: .နောက်ကျနေတာခွေးလွှတ်ပါ
.ကျုပ်လည်း အရီးမုတ်ဆိတ်ပုံမှာ အပြာနဲ့ ချောကလက်ရောင် ပဲ မြင်ပါတယ်…ခင်ဗျ…။
.သဂျီးပုံမှာတော့ ဘလူး၊ ဘလက်၊ ဘရောင်း…သုံးမျိုး
အောင် မိုးသူ says: ကျတော်ထင်တာ မှောင်ရင်တစ်ရောင် လင်းရင်တစ်ရောင် ငိငိ
manawphyulay says: ဒီဇာတ်လမ်းက အရောင်က တစ်ခါ ဒီမှာ တင်လို့ ကြည့်ပြီး ဖတ်မိပါသေးတယ်။